Kungani inja yami ine-wax emnyama ezindlebeni zayo? | Izinja Umhlaba
I-Wax Emnyama Ezindlebeni Zenja Yakho
I-Encarni Arcoya | | Curiosities, Izifo, Izinja ezijwayelekile
Izinkinga nokutheleleka ezindlebeni zesilwane sethu kuvame kakhulu. Isikhathi esiningi kubangelwa ukuntuleka kwenhlanzeko noma ngokumane kuhlanzwe kahle izindlebe zezinja zethu. Lezi zinkinga zezindlebe zivame kakhulu ezinjeni ezinezindlebe ezinde ezinde.
Ukunakekelwa okuseduze kufanele kukhokhelwe ekuqongeleleni i-wax emnyama ezindlebeni ngoba lokhu kungaba yisandulela sokutheleleka noma isifo. I-wax emnyama ingadalwa yizizathu ezahlukahlukene, kusuka enhlanzekweni engeyinhle nokungcola okuqongelelwe kuya ekuthelelekeni noma ekuhlaselweni yizimbuzane ezindlebeni.
1 Izimbangela zokuthi kungani inja yami ine-wax emnyama ezindlebeni zayo
1.1 I-wax emnyama evela ku-otitis
1.2 I-wax emnyama ngezibungu
2 Izimpawu okufanele uziqaphele
3 Amathiphu wokuhlanza izindlebe zenja yakho
4 Isinyathelo ngesinyathelo ukuhlanza izindlebe zenja
4.1 Isinyathelo 1: lungiselela inja yakho
4.2 Isinyathelo 1: ukuhlanza kokuqala
4.3 Isinyathelo 2: hlanza futhi
4.4 Isinyathelo 3: sebenzisa okokuhlanza izindlebe
4.5 Isinyathelo esingeziwe
5 Amakhambi asekhaya okususa i-wax emnyama
6 Inja yami ayivumeli izindlebe zakhe zihlanzeke, ukuthi benzeni?
Izimbangela zokuthi kungani inja yami ine-wax emnyama ezindlebeni zayo
Kunezizathu eziningi zalokhu okuzovela, futhi phakathi kwezinto ezivame kakhulu esingazisho:
Una inani elikhulu lokungcola nothuli phakathi kokunye ekuqoqayo kusuka emvelweni, okunamathela ezindongeni zomsele wendlebe.
Una ukutheleleka okungadalwa ukuqoqwa kwamanzi ngaphakathi kwendlebe ngesikhathi sokugeza, ngenxa yokuba khona komzimba wangaphandle noma ukungabikho kwezinyathelo zenhlanzeko.
Ukuthi isilwane sinenkinga ukutheleleka kwezindlebe, ezibangela ukucasuka, ukulunywa, ukufakwa kwesikhumba, ubuhlungu nokutheleleka.
Zonke lezi zinto zenza ukuthi kuvele i-wax emnyama, kanye nezinye izimpawu ezifana nalezo esesizichazile ngaphambili.
I-wax emnyama evela ku-otitis
I-wax ikhiqizwa ngokwemvelo yizinja njengendlela yokuvikela yalesi sitho esibalulekile futhi esibucayi njengendlebe. Kodwa-ke, lapho le wax iba mnyama ngombala, esinye sezimbangela ezijwayelekile kungenxa yokuthi inja ine-otitis.
Le wax enombala omnyama imvamisa ihambisana nephunga elibi kakhulu, izikhalazo zobuhlungu endaweni eseduze nokuvuvukala, ngaphezu kwe-suppuration. I-wax emnyama ingaqedwa ngokuqhubekayo ngokuhlanzwa komsele wezindlebe, okumele wenziwe ngokucophelela nangobumnene obukhulu, ukuze lokho okuhlangenwe nakho kungakhathazi isilwane sakho.
Kodwa-ke, uma kubangelwa ukutheleleka noma i-otitis, kubalulekile ukuthi kubuyekezwe ngudokotela wezilwane ukunquma ukwelashwa okufanele, kuya ngezinga lokutheleleka, izici zenja, isisindo, njll.
I-wax emnyama ngezibungu
I-Los izibungu enye inkinga yokuthi izinja zingakha i-wax yendlebe emnyama. Yizilwanyana ezincane ikakhulu ezisesikhumbeni nasejazini lezinja futhi, uma zingabanjwa ngesikhathi, kungakwenza uhlakulele izifo, ezinye zazo zibucayi impela.
I-mite iyi- "bug" engaphansi kwesimilimitha ngosayizi. Idla kakhulu egazini lesilwane, kepha futhi nezinsalela zesikhumba endaweni lapho zihlala khona. Ngakho-ke, izinja zizwa kakhulu ukulunywa nobuhlungu. Kepha, lapho lezi zihlala endlebeni, kungacasula kakhulu.
Ngokuqondile, izibungu ezidla ezindlebeni zibizwa ngokuthi i-Otodectes cynotis, eyaziwa kangcono njengezindlebe zezindlebe. Zivame kakhulu ezinjeni nasemakati, ngaphezu kokubonwa kalula. Futhi ziyathathelana kakhulu.
Phakathi kwezimpawu abazibangelayo iqiniso lokuthi inja yakho imvamisa itshekisa ikhanda layo, kube sengathi uhlangothi olulodwa lusinda ngaphezu kolunye. Imvamisa, indlebe, ephakanyisiwe, nayo izovela inganxenxwanga, noma iphonswe emuva. Esinye isibonakaliso sezibungu ezindlebeni ukuvela kwalowo wax omnyama endlebeni, kwesinye isikhathi akubonakali ngaphandle, kepha yebo uma kushona kancane (ngokwesibonelo uma uthatha ukuhlanzwa kwezindlebe).
Lapho kungathathwa izinyathelo zokuzivikela, phakathi kwemiphumela isilwane sakho esizohlupheka ngayo ukopha kwangaphakathi (kusuka endlebeni), ukutheleleka ngezimbungu, noma ukugqobhoza kwe-eardrum (okuyingozi kakhulu ngoba kungafinyelela ebuchosheni).
Kungakho kunconywa ukuthi, uma kwenzeka kuba nezimpawu ezingavamile zenja, udokotela wezilwane uyobheka indlebe futhi angakhombisa ukuthi iyiphi indlela yokwelashwa engcono, kungaba i-insecticide, nemithi, ne-acaricidal shampoo, noma nemikhiqizo evimbela lesi simo. Ngaphezu kokukunikeza eminye imiyalelo yokuvikela inkinga.
Izimpawu okufanele uziqaphele
IMENFORSAN Yokuhlanza i ...
Ungaqala ukubona ukuthi izindlebe zenja yakho banephunga elibi kakhulu. Khumbula ukuthi i-wax yendlebe inephunga elinamandla, kepha uma kwenzeka ukutheleleka iphunga alithandeki.
Lapho kukhona i-wax emnyama eyeqile, kungabuye kubonwe ububomvu, nokuvuvukala ezindlebeni of isilwane sakho. Imvamisa ungaqala ukuqaphela ukuthi inja yakho inikina ikhanda noma inwaya izindlebe zayo ngokweqile.
Ebhekene necala lokutheleleka nge-mite, kungahle kube nobomvu noma izilonda ezindlebeni zenja yakho, kuhambisana nokulunywa okunamandla nocwecwe elimnyama likashokoledi.
Kunezinye izimpawu okufanele uziqaphele:
Ifulegi elibomvu yilapho inja ivamise ukunikina ikhanda noma ukuyitshekisa eceleni, omunye lapho elokhu enwaya izindlebe zakhe. Lokhu kungasho ukuthi une-otitis noma esinye isifo.
Bheka izimo zomsele wendlebe, Uma kubomvu kakhulu, kuqhuma, kubukeka kuvuvukala noma kucasukile, kungenxa yokuthi kunenqubo yokutheleleka ukubhekelela, kungakho i-wax emnyama ezindlebeni zakhe.
Lapho inja ungabi nandaba, angafuni ukunyakaza, ukudlala noma ukudla.
Uma unayo ukusabela ngokweqile lapho uthinta izindlebe zakhe noma vala.
Nini wenqabe oxhumana naye ngokomzimba
Uma kukhona ubukhona be-wax emnyama ngobuningi.
Bheka indawo ezungeze izindlebe ukuba khona kwamaqhubu okuvela ekuthelelekeni.
Lapho ubhekene nanoma iyiphi yalezi zimpawu, kubaluleke kakhulu ukuthi uvakashele udokotela wezilwane, ozoxilonga ukwelashwa okungcono kakhulu ongakulandela nesilwane sakho.
Ezimweni eziningi, ukuhlanzwa okujulile kwezindlebe zesilwane sakho kuxazulula inkinga, kepha ama-antibiotic kumele asetshenziselwe ukwelapha inja yakho ngokuphelele.
Amathiphu wokuhlanza izindlebe zenja yakho
Sesibonile ukuthi kubalulekile ukugcina inhlanzeko endlebeni yenja, kepha ungayigcina kanjani ihlanzekile ngendlela efanele? Naka izeluleko ezilandelayo:
Izindlebe zesilwane sakho Kufanele zihlanzwe okungenani kanye njalo emavikini amathathu, kepha-ke, lapho uhlobo luthambile futhi lude, kungcono ukufaka ukuhlanza kanye ngesonto..
Kubalulekile ukukwenza njalo, ukuze inja ijwayele futhi ihlanzwe ngaphandle kwezinkinga.
Ngendlela efanayo, imvelo ezungezile kufanele ibhekelwe ukusebenzisa izindlela zokuhlanzeka ngemvamisa efanele, ngoba kungenzeka ukuthi ivezwe ukungcola, izinhlayiya, umhlaba, umoya omningi nezinye izinto ezithanda ukuqoqwa. lokungcola ezindlebeni nasemseleni wezindlebe.
Isinyathelo ngesinyathelo ukuhlanza izindlebe zenja
Ukugcina inhlanzeko efanele ezindlebeni zenja yakho kuzosiza ukuvimbela izinkinga, hhayi kuphela ku-wax omnyama, kepha nanoma yikuphi okunye okuphathelene nezindlebe. Kepha ukuze ukwenze futhi usebenze, udinga ukukwenza okungenani kanye ngesonto.
Inja enempilo inendlebe ebomvana ngaphakathi, ngaphandle kukakhokho noma i-wax eningi. (Kufanele wazi ukuthi izindlebe, njengabantu, zakha i-wax ngokwemvelo, ngakho-ke awukwazi ukuyivimba). Futhi, ayinuki kabi. Uma kwenzeka uqaphela okuthile kwalokhu esesikushilo, kungcono ukuthi uye kudokotela wezilwane uyobheka ukuthi konke kuhamba kahle yini noma kukhona okungajwayelekile.
Lokho kusho, kufanele wazi ukuthi ngenxa ye-wax eyakhayo, kuyinto ejwayelekile ukuthi izinja zibe nezindlebe ezingcolile kancane, kepha yingakho kubalulekile ukuthi uchithe isikhathi esithile ukuzihlanza kahle. Noma kunjalo lapho kuvela i-wax emnyama esabekayo endlebeni.
Futhi kwenziwa kanjani? Yebo, sizokunikeza izinyathelo zokukwenza. Ngokomthetho, ukuhlanzwa kwendlebe kwenziwa masonto onke, kodwa inja ngayinye yehlukile futhi kuzoba khona abadinga ukuhlanzwa njalo (isibonelo, izinja ezinezindlebe ze-floppy), nezinye ezihlala izinsuku eziyi-15 noma ngaphezulu ngaphandle kokuzihlanza.
Ngaphambi kokuba ufike kukho, ngincoma ukuthi ube nakho konke okudingayo esandleni. Kulokhu-ke yilezi: i-gauze, i-saline noma amanzi, ne-cleaner yezindlebe (uma uthanda).
Isinyathelo 1: lungiselela inja yakho
Udinga inja yakho ukujwayela ukuhlanza izindlebe zayo, futhi ngalokhu kufanele umyise endaweni lapho ezizwa ezolile khona nalapho ekuvumela ukuthi ulawule izindlebe zakhe. Kunezinja ezingazijwayele, noma ezibethusa, futhi kungaba nzima kakhulu, kepha kungenxa yempilo yazo, ngakho-ke zama ukungazikhathazi.
Isinyathelo 1: ukuhlanza kokuqala
Qhubeka nokuhlanza kokuqala. Ukwenza lokhu, thatha i-gauze uyithambisa, kungaba ngamanzi noma nge-saline solution. Bese umboza inkomba yakho noma umunwe omncane ngayo bese faka umunwe ogoqiwe ngokucophelela endlebeni yenja.
Kwesinye isikhathi, ukuze umqinisekise, ungahlanza indlebe kuqala ukuze ubone ukuthi akukho okungahambi kahle. Vele, lapho uzofaka umunwe wakho endlebeni, zama ukuthatha i-gauze entsha. Zama ukwenza ukunyakaza okuyisiyingi okuhamba kancane nokubucayi ukuze ukhiphe i-wax.
Ingabe i-wax ejwayelekile? Kulungile. Ingabe ingcina emnyama? Qaphela, ungaba ne-otitis noma izibungu. I-wax eningi kakhulu? Lapho-ke kungahle kube nenkinga.
Isinyathelo 2: hlanza futhi
Kumele uphinde isinyathelo sokuqala kuze kube yilapho i-gauze iphuma ihlanzekile. Uma ubona lokho, yize uhlanze izikhathi ezingama-2-3, kusengcolile, kungaba yisikhathi sokubuza udokotela wezilwane.
Isinyathelo 3: sebenzisa okokuhlanza izindlebe
Enye indlela onayo, lapho ubona ukuthi noma ngabe uhlanza malini, kusengcolile, ukusebenzisa i- okokuhlanza izindlebe kwezinja. Lezi kulula kakhulu ukuzisebenzisa njengoba zibekwe ngaphakathi endlebeni futhi kunikezwa umfudlana noma ukukhishwa kwalolo ketshezi.
Ngemuva kwalokho kufanele nikeza ukubhucungwa komzimba ukuze ohlanzayo afinyelele eardrum futhi akwazi ukuhlanza kahle. Isikhathi esiningi, uma isikhishiwe, inja izonyakaza imizuzu embalwa. Kepha ungakhohlwa.
Isizathu ukuthi manje kuzofanela uhlanze futhi nge-gauze entsha ukuze ususe lokho okungenzeka ukuthi lowo mkhiqizo ukwazile ukukukhipha endlebeni. Uma kwenzeka ubona ukuthi kusangcolile kakhulu, yebo, sekuyisikhathi sokuya kudokotela wezilwane.
Kukhona izinja ukuthi thuthukisa izinwele eziningi endaweni yendlebe. Lokhu kunomsebenzi wokuvikela indlebe ukuze kungangeni lutho kuyo. Kepha kwesinye isikhathi kubuye kube ngumthombo wokutheleleka kukodwa, ngakho-ke kwesinye isikhathi kufanelekile ukuyinciphisa kancane.
Lokhu kungenziwa ngesikele, kucatshangelwa ukubukeka kwendlebe futhi kungalimazi nendlebe; noma ngomshini, noma yimuphi wokugunda izinwele, noma ama-clippers abawathengisa ngezindlebe namakhala (amancane futhi alungele kakhulu lezi zindawo ezinjeni).
Amakhambi asekhaya okususa i-wax emnyama
Uma isilwane sakho sine-wax emnyama ezindlebeni ngokwalokho esesikubonile kuze kube manje, lokhu kushukunyiswa inhlanzeko embi, ngakho-ke alikho ikhambi elifanele lasekhaya, ngaphandle kokufaka isicelo sokuhlanza ngezikhathi ezithile kule ndawo.
Futhi, kungenzeka ukuthi unesifo, njenge i-otitis, okudinga ukunakwa ngudokotela wezilwane futhi mhlawumbe nokwelashwa ngama-antibiotic, kusukela i-otitis intekenteke futhi ayelapheki ngamakhambi asekhaya.
Ngalo mqondo, into eluleka kakhulu ukuthi ungazami ukususa i-wax emnyama ezindlebeni ngokwakho uma inja yakho inganqikaziKhumbula, ngoba uzizwa ungakhululekile noma ubuhlungu, kungenzeka ukuthi ube nempendulo engathandeki yokuzivikela. Okubalulekile ukuthi njengenkosi yakho ufunde ukubona lapho isimo singaphandle kokujwayelekile.
Inja yami ayivumeli izindlebe zakhe zihlanzeke, ukuthi benzeni?
Njengoba inja yakho iwumdlwane, kumele umjwayele imikhuba yakhe yenhlanzeko njalo, phakathi kwabo ukuhlanzwa kwezindlebe ukuze zikuthathe ngendlela engokwemvelo, futhi ngaleyo ndlela kuvimbele isikhunta ukuthi singaveli futhi izifo nezifo ziyanda.
Lapho engakujwayele, umane anqabe ukuthintwa, futhi lokhu kudala ngisho nengcindezi kanye nokuzonda. Ungazama ukuxhumana nezindlebe zakhe ngendlela ecashile, lokho akubangeli ukungakhululeki noma ubuhlungu.
Uma ungumuntu omdala futhi ungakujwayele ungenzi ukuhlanza ngendlela enokhahloUma umthola ukuthi ahlale ezolile futhi akhohlise, sebenzisa ukuqinisa okuhle, ngakho-ke umgcina ejabule futhi afunde ukuthi akuyona into embi.
Lapho uhlanza ngaphakathi kwendlebe, yenza ukunyakaza ngendlela yokubhucungwa kamnene kakhulu. Massage ingxenye engaphandle yezindlebe bese unikeza ukuphatha njengoba ukuzilungisa kuvunyelwe ukufaka isicelo kule ndawo.
Njengendlela yokugcina, iya kudokotela wezilwane ukuthola iseluleko sendlela engcono yokwenza inja yakho ivumele izindlebe zayo ukuba zihlanzwe.
I-wax emnyama ngenxa yalokho ingesinye sezibonakaliso zokuthi kukhona okungahambi kahle ezindlebeni zesilwane sakho, ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi uhlale uqaphile futhi lapho ubhekene nalokhu nezinye izimpawu, ungavumeli isikhathi esiningi ukukuyisa ekubonisaneni, ngoba uma ukutheleleka kuba kubi, izindlela zokuphulukisa ziyoba nolaka kakhulu Futhi lokhu ngaphandle kokubala ukucasuka okwenziwa enjeni yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » I-Wax Emnyama Ezindlebeni Zenja Yakho
UHector N. Oxilia kusho
Sawubona. Ukuphawula kwakho ngodaba lokukhishwa kwe-wax emnyama bekungithakazelisa kakhulu. Isilwanyane sami sinenkinga, futhi udokotela wezilwane umnikeze ukuvuvukala kanye namagciwane. Ngiyabonga.
Phendula uHéctor N. Oxilia
Izimbangela zesisu esivuvukile ezinjeni